Ku raaxayso Amazon Music HD bilaash ah 3 bilood | Androidsis
Ku raaxayso Amazon Music HD bilaash ah 3 bilood
Mar labaad, ragga Amazon waxay noo soo bandhigeen dalab kaas ma awoodi doonno inaanu baxsanno, gaar ahaan haddii aan nahay muusikada jecel oo aan jecel nahay inaan ugu raaxeysano tayada ugu sareysa adeegga muusikada qulqulka.
Amazon ayaa dib u bilawday kor u qaadis bilaash ah 3 bilood gebi ahaanba bilaash ah Amazon Music HD, qeexitaankaaga sare ee adeegga muusigga qulqulka ah in Waxay leedahay qiimo joogto ah 14,99 euro bille ah.
Dalabkan waxaa heli kara oo kaliya macaamiisha cusub, markaa haddii aad ka faa'iideysatay dalabkan horay, ma awoodi doontid inaad mar labaad sameyso.
1 Maxay Amazon Music HD na siisaa
2 Sidee looga faa'iideysan karaa dalabkan
Maxay Amazon Music HD na siisaa
Amazon Music HD waxay na siisaa isla tayada codka ee aan ka heli karno Tidal, adeegga qulqulka muusikada ee farshaxanada oo qiimahoodu yahay 19,99 euro, oo ah nooca Amazon 5 euro ka jaban.
Diiwaanka waxaa laga heli karaa Amazon Music HD waa isla kan laga heli karo Amazon Music (70 milyan oo heeso ah), laakiin laba jibbaarkeed. Intaa waxaa dheer, waxay na siisaa malaayiin heeso Ultra HD ah oo leh 10 jeer xoogaa heerka waxoogaa ah.
Si aan isu fahamno, mahadnaqa qaabkan qeexitaanka sare, waan awoodnaa dhagayso muusikada sida farshaxanku runtii u riyaaqay marka lagu duubayo istuudiyaha wax lagu duubo.
Sidee looga faa'iideysan karaa dalabkan
Waa inaad maskaxda ku haysaa in waqtigaas kadib, Amazon ay si otomaatig ah u bilaabi doonto inay ku soo rogto 14,99 yuuro oo adeegani ku kacaayo ilaa aad ka saarto liiska ka hor dhamaadka tijaabada bilaashka ah.
Waxaan ku celinayaa markale: Haddii aad horey uga faa'iideysatay dalacsiintan hore, ma awoodi doontid inaad markale ku raaxaysatid. Haddii aad leedahay saaxiib ama isticmaale caan ah oo Amazon ah oo aan u adeegsan doonin, waad ku samayn kartaa adoo isticmaalaya koontadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Muusig bilaash ah » Ku raaxayso Amazon Music HD bilaash ah 3 bilood
LastPass mar dambe xor ma noqon doonto Maarso
The iQOO Neo 5 waxaa la sii deyn doonaa bisha Maarso iyada oo ay la socoto Snapdragon 870